Oromiyaa: Kuni Waan baayyee gaddiisisaadhas Fokkisaadhas!!Irra deddebi’ee umamaa jiras. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: Kuni Waan baayyee gaddiisisaadhas Fokkisaadhas!!Irra deddebi’ee umamaa jiras.
Waan baayyee gaddiisisaadha. Irra deddebi’ee umamaa jira. Yookan lafa awwaalaa nuf keennaa, yookan nuf awwaalaa. Lubbuun bakka dhugaa jira, fon fi lafe lafatti hafeef bakki awwaalchaa nu barbaachisa. Lafa keenya lafee keenyaaf!
Dubbii gaddisiisaa! Ganamaa kaasee hanga ammaatti awwaalcha dhorkaniiru!
Bataskaanaa Gabreelii Caancoo Birratteeti. Namni du’e obbo Abdiisaa Hinsarmuu Boshii ture. Umriin 78 dha. Rakkoon tuni fafa. Namni kun Waaqeffataa waan ta’eef awwaala dhorkame. Bataskaanaa kan ijaare isaanuma. Laftis kanuma abboota isaati. Raajii fi ajaa’iba kana Oromoo hundi arguu qaba. Dhiinaan rakkoo umaamuf bataskanicha, bulchiinsa aanaa itti anaa kaasee iddoo sanatti argamaa jiraniidha. Nu haa baraaruu. Awwaala dhabuu fi jiruu dhabuu biyya ofii!
Dhaabbata Hordoftoota Amantii Waaqeffannaa
Oromoo! Jaallatu jibbutus jarri kun ilmaa #Bilxiginnaa!
I empathize with our people, who are being refused burial spaces, mainly at Orthodox church or Muslim cemeteries in their ancestral lands. I think that acquiring “Waaqeffataa” burial spaces and developing cemeteries owned and managed by followers of waaqeffanaa religion is the solution for the long term. Oromo: know your rights; the government has responsibility to grant burial spaces to followers of different religions as well as nonreligious citizens. Organize yourselves as followers of Waqeffanaa religion and demand to get your own spaces in every part of the county.
RIP the honourable Waaqeffataa in this news (Obboo Abdiisaa)